Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli waa bilaash ka dib 19.00 | RayHaber | raillynews
HometareenkaGaadiidka dadweynaha oo bilaash ah saacadaha Kocaeli kadib 19.00
28 / 07 / 2016 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels
Gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli waa saacado bilaash ah 19.00: Basaska iyo maraakiibta ay maamusho Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Degmada Kobanheegan iyo Gaadiidka Dadweynaha ee magaalada oo dhan waxay bixiyaan gaadiid bilaash ah muwaadiniinta ka dib saacadda 19.00. Ilaa iyo inta ay dadka Kocaeli sii wadaan in ay daawadaan dimoqraadiyada ka jirta magaalooyinka, baabuurtu waxay sii wadi doonaan inay bixiyaan adeeg bilaash ah ka dib 19.00. Si kastaba ha ahaatee, Line 200C iyo Line 800K oo leh Hat 800 ayaa laga reebayaa.
ADEEGYADA BILAASHADA SABABTA
Dhinaca kale, Waaxda Gaadiidka Dadwaynaha ee Magaalada Kacaani waxa ay sii wadaan wadooyinka adeegga bilaashka ah ee udhaxeeya degmooyinka udhaxeeya saacadaha 24.00-04.00 si ay u siiyaan guryaha dadka muwaadiniinta ah ee haysta dimoqraadiyad ku taal Izmit Khamiista. Ilaa iyo inta ay dadkeenu ku sugan yihiin xarumo, adeegyo habeenkii oo lacag la'aan ah ayaa sii wadi doona saacad kasta saacadaha 24.00-04.00.
24.00-04.00 waa saacad u dhaxaysa adeegyada u dhexeeya sida soo socota;
Khamiis Thursday-Gündogdu-Baanka Adduunka
Fiiro gaar ah: Wadooyinka waa meelaha ugu dambeeyay ee lagu muujiyay D-100 iyo D-130.
Izmir Metro Evka 3 iyo saldhigyada jaamacadaha ee Ege berrito (Jimcaha, Maarso 30) safka
Heesta Qaranka ayaa la xaday 21.00:XNUMX at Marmaray Stations
Gaadiidka dadweynaha ayaa bilaash u noqon doona ardayda geleysa YGS ee Istanbul
Mashruuca Tramway Tramway ee Izmir ayaa la bilaabay (Sawir Sawir)
Xaaladda Wadada İzmir
Xaalada Wadada İzmir RAYHABER Waxay ku siisaa marinnada ugu fudud iyo xaaladaha wadada ee aad kula tegi karto khariidad waddo oo toos ah. Xaaladaha wadooyinka ee xarunta Izmir iyo degmooyinka kale, [More ...]
Maanta Taariikh ahaan: Nofeembar 22, 1922 Lausanne, İsmet Pasha's…
Gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee Istanbul 22 ayaa la sii waday ilaa July